एमबिए पढ्न चाहनेलाई चौधरी ग्रुपको प्रस्तावः पढाइ सक्किएपछि जागिरकाे पनि अवसर | नेपाल आज
सोमबार, १० पुष २०७४ गते मा प्रकाशित
काठमाडौं । ‘चौधरी ग्रुप’ आफैंमा एउटा ‘ब्राण्ड’ हो । सीजीले नेपालमा मात्र होइन विश्वका थुप्रै देशमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको छ । होटल, रियलस्टेट, सिमेन्ट, स्वास्थ्य, उर्जा, खाद्यन्नलगायतका विभिन्न विधामा लगानी गर्दै आफ्नो ‘ब्राण्ड’लाई विश्व सामू परिचित बनाउँदै आएको सीजीले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा पनि हात हालेको छ । प्राज्ञिक ज्ञानलाई उद्योगसँग जोड्ने उद्देश्यसहित शिक्षा क्षेत्रमा हात हालेको सिजीको दाबी छ ।
सीजीले सीजीआइएम कलेजको माध्यमबाट व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको सबैभन्दा उत्कृष्ट र प्रतिष्ठित बिधा मानिने एमबिए प्रोग्राम सञ्चालन गरेको हो । नेपालकै स्थापित व्यवसायिक घरहानाद्वारा संचालित यो कलेज छोटो अवधीमै स्थापित भएको छ । सीजीआइएम कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी आफ्नो भविष्य स्थापित हुने कुरामा ढुक्क देखिन्छन् ।
कलेजका प्रधानाध्यापक प्रमोद पराजुलीका अनुसार सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिकरुपमा रुपान्तरण गर्न कलेजले जोड दिने गरेको छ । सीजीआइएममा अध्ययन गरेका विद्यार्थीका लागि सीजीले अवसर दिलाउने पराजुलीको भनाइ छ । पराजुली भन्छन्, ‘प्रत्येक ब्याचका कम्तीमा पनि दशजना उष्कृष्ट विद्यार्थीलाई सीजीले प्रत्यक्ष रुपमा ‘प्लेसमेनट’को अवसर दिन्छ ।’
सीजीआइएम कलेजले एमबिए सुरु गरेको तीन वर्ष पछि आउँदो फेब्रुअरीमा इनटेकको लागि भर्ना खुल्ला गरेको छ । आकर्षक विज्ञापनभन्दा पनि प्रभावकारी मुल्यांकन, अनुभवी शिक्षक, चुस्त व्यवस्थापन, सिकाइ केन्द्रीत पढाइ, प्रतिवद्ध संचालक आदि कुरा ख्याल गरेर सिजीले शिक्षा क्षेत्रमा हात हालेको प्रधानाध्यापक पराजुलीको दाबी छ ।
के हो सीजीआइएम एमबीए ?
सीजीआइएमको एमबीए प्रोगामले मलेसियाको लिमककविङ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको छ । विश्वको दशवटा देशका बाह्रवटा ठाउँमा यो विश्वविद्यालयअन्तर्गतको एमबीए प्रोग्राम चल्छ । सीजीआइएममा एमबीए चलाउने आफ्नै सिद्धान्त र मूल्य मान्यता रहेको कलेजका प्रधानाध्यापक पराजुली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी सधैं स्टुडेन्टसेन्ट्रिक (विद्यार्थी केन्द्रीत) हुन्छौं । यहाँ चल्ने प्रोगाम नै विश्वभर चल्छन् । विशेषगरि हाम्रो कलेजमा भएको एमबीए प्रोगाम इन्डस्ट्रिसँग जोडिएको छ । विद्यार्थीहरु यहाँ आए भने ग्लोबलाइज्ड करिकुलम (विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम) र इन्डस्ट्रि अलाइड (बजारमैत्री) वातावरणमा सिक्ने अवसर पाउँछन् । एमबीए ग्राजुएटको मार्केटमा भएको माग हामीले पूरा गर्न सक्छौं ।’
‘सीजीआईएम आइएसओ सर्टिफाइड कलेज हो । त्यसकारण यसको भौतिक पूर्वाधार र मर्मत संभार आइएसओअनुसार नै चल्छ । हाम्रो सुुविधा सधैँ विद्यार्थी केन्द्रीत हुन्छ ।’ उनले थपे ।
आइएसओ सर्टिफाइड कलेज भएको हुनाले यसका भौतिक पूर्वाधारमा कुनै कमी नरहेको कलेजका प्रधानाध्यापक पराजुली बताउँछन् । खेलकुदको लागि मैदान, सेमिनार हल, कक्षाकोठा र हरियालीलाई कलेजले चुस्तस्फुर्त राखेको छ ।
एमबीए पढाएर विद्यार्थीलाई म्यानेजरसँगै उद्यमी पनि बनाउने उद्देश्य रहेको कलेजका एमबीए प्रोगाम प्रमुख लक्षमण पोख्रेलले बताए । एमबीए पढेका विद्यार्थीलाई अबको दिनमा उद्यमी बन्न पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘विद्यार्थीमा रोजगारी खोज्ने मात्र नै भएर रोजगारको अवसर बनाउन सक्ने क्षमताको विकास गराउनुपर्छ । यसको लागि सीजिआइएमले विद्यार्थीको विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिने गर्छ । करिकुलम नै सबै थोक होइन । यो एयर्पोर्टको रनवेजस्तै हो । तर यसमा मात्र सिमित हुनु भएन बजारको डिमाण्डअनुसार चल्न सक्नुपर्छ ।’
कस्ता विद्यार्थीले सीजीआइएममा एमबीए गर्न पाउने ?
सीजीआइएममा एमबीए पढ्न व्यवस्थापनकै विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने जरुरी नरहेको भन्दै पोख्रेलले भने, ‘यहाँ हामी पढेपछि डिग्रीसँगै सीपको पनि विकास गराउँछौ । एमबीए म्यानेजमेन्टको प्रोगाम भएपनि यो सबै क्षेत्रमा चाहिन्छ । यो पढ्नलाई म्यानेजमेन्ट नै पढेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । इन्जिनियरले पनि एमबीए गरिरहेका छन् । कुनै पनि विधामा स्नातक उत्र्तिण विद्यार्थीहरुको न्युनतम प्राप्ताङ्क ४५ प्रतिशत तथा सिजिपिए २.५ प्राप्त गरेका विद्यार्थीले सीजीआईएममा एमबीए गर्न सक्छन् । नेपालको ठूलो इन्डस्ट्रिसँग सिधै जोडिएको हुनाले हाम्रो विद्यार्थीले उद्यमबारे बढि ज्ञान आर्जन गर्न सक्छन् ।’
उनले आफ्नो प्रोग्रामका बारेमा सिधा सम्पर्क गर्न सुझाउँछन् । पराजुलीले फोन नम्बर दिँदै भने, ‘हामी सबै कुरा जस्ताको तस्तै भन्छौँ, एक कल डायल गर्नोस् । यो हो हाम्रो सम्पर्क नम्बरः
फाेनः १–४१०७१०१, ४१०७११४